ịga nke ọma
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski Ihe na Campaigns Permalink
12. March 2018 Oliver Bienkowski
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 12. March 2018
#PixelHELPER na-etozi 100,000 maka ozi gbasara njide nke ndị na-akwado Daphne Caruana Galizia. Biko kwado mkpọsa anyị na pixelhelper.org/en/donate
"Ihe ngosi e dere na ọbara ndị ọzọ" - nke ahụ bụ ihe ọkọ akụkọ ihe mere eme America bụ Mike Davis kpọrọ bọmbụ ụgbọ ala ahụ. Peugeot 108 na-aga n'okporo ụzọ na Bidnija, ndị bi na 309, iri na otu kilomita n'ebe ọdịda anyanwụ Malta isi obodo Valletta.
Na October 16, Daphne Caruana Galizia, 53 afọ, bụ n'azụ ụgbọala nke ụgbọ ala ya. Ọ mere na gravel ụzọ isi n'okporo ụzọ, amama ekpe, ala n'ugwu si ebe dị anya enwetụ nke oké osimiri nwere ike hụrụ, gara aga a obere, ọhịa landfill na a zukini ubi, 270 yaadị, ka a red-rimmed ịrịba ama, na nke hedghog na-ajụ onye ọkwọ ụgbọ ala ka ọ ghara imebi ya. Ihe mgbawa ahụ, ndị nchọpụta ahụ kwenyere, sitere na ekwentị mkpanaaka. Na elekere 15.04, foduru nke Peugeot bụ 100 mita na-aga n'ihu, n'ụzọ dị n'akụkụ ụzọ. Ndị ọkà mmụta sayensị asaa ndị Dutch bụ ndị na-enyocha ahụ dị na Galizia ụbọchị atọ ka e mesịrị na ụlọ ọgwụ Valletta nke Mater-Dei adịghị ahụ ọtụtụ. Enweghi ntakịrị aka nke onye oru nta akuko nke kachasi ama mara na nke kachasi anya. Minit 29 tupu ya anwụọ: "N'agbanyeghị ebe ị na-ele anya, e nwere ndị crook n'ebe nile. Ọ bụ inwe obi nkoropụ. "
A izu gasịrị, Ụmụ ndị ikom atọ nke Galicia nọ European nzuko omeiwu na Strasbourg, arụrụ ụka ihe igbu ọchụ nke nne ha kwuru banyere Malta na ikekwe banyere EU. Green MP Sven Giegold na-ewe okwu okwu. "E gburu Daphne n'okporo ámá. E nweghị ebe nzuzo, ndị na-egbu ha adịghị ọbụna anwa ime ka agha ahụ yiri ihe mberede. N'ụzọ dị iche, nke a bụ ngosipụta dị egwu nke ike, "ka ọ na-ekwu. O doro anya ihe mere bọmbụ nke bụghị n'okpuru onyeisi ndị uwe ojii ma ọ bụ ọka iwu izugbe nke ụgbọ ala: "Ọ bụ Daphne onye a ghọtakwuo usoro ego Laundering na nrụrụ aka na Malta - ya ihe bụghị tesis ọchịchị."
Ka ememe ncheta a na-eme na Strasbourg, Rosy Bindi, bụ isi nke Òtù Anti-Mafia nke Italian, na-abanye na Excelsior Hotel na mgbidi ndị dị na Valletta. Ruo ọtụtụ ụbọchị, ọrụ ahụ dị na Malta, nleta ahụ mere atụmatụ ruo ogologo oge, ma ugbu a, mgbe e gbusịrị ndị na-ede blọgụ, mmasị dị ukwuu. N'ịbụ ndị ndị na-ahụ maka nchebe dị mma gbara ya gburugburu, bụ ndị a na-etinye n'ime ntị ha, Bindi nọdụrụ ala na tebụl ma lelee ndị nta akụkọ bụ ndị nọ n'oche ndị na-akpụ akpụ akpụkpọ anụ. Mafia, ka Bindi na-ekwu, hụrụ Malta dịka "obere paradaịs". Ya mere, "ndị na-enye ego nwere ike inye aka na-emeghe ahịa na Malta" bụ "akụkụ nke nsogbu ahụ".
Maka Malta, okwu Bindi bụ nsogbu. Ọ bụ ọkachamara na mafia Italian maka ọtụtụ iri afọ, nke ahụ bụ okwu maka ibu. Malta anọwo na-alụ ọgụ n'ihi aha ya kemgbe a gbasasịrị ya na Galicia.
Ogbugbu nke ya, dị ka a na-ekwu n'àgwàetiti ahụ, ọ bụ ihe ngosi na ndị na-eche banyere ọgụ megide mpụ adịghịzi ama banyere Malta.
Nnyocha Galiegia, na-akpọ ka a zite ndị nyocha ụwa. Ọ na-achọ ka ndị isi Social Prime Minister Joseph Muscat kwụsị ọrụ ma hụ na ndị omeiwu Europe chọrọ iziga ndị nnọchiteanya Malta ka ha "weghachite iwu iwu".
Ise bombu ise n'ime afọ abụọ
Ọ bụghị naanị ya na-ahụ ya. Azerbaijan, mmanye mmanụ, paspọtụ na ịgba chaa chaa n'ịntanetị. Ihe kachasi n'akụkọ ihe mere eme Galizia enyela aka. Nwa ya nwoke bụ Mathew na-arụ ọrụ na netwọk IJIC, nke kpughere akwụkwọ 2016 Panama. Galizia nwetara akwụkwọ banyere Malta. Keith Schembri, onye ụkọchukwu nke minista Mincat, na onye ọrụ ibe ya Konrad Mizzi - bụ ndị mbụ na-ahụ maka ndị njem - nọgidere na-elekọta ndị ụlọ mkpuchi na Virgin Islands na Panama. Enwee ego ọhụụ nke ndị mmadụ na-eme na mpụ na-emezi ka ọ ga-agba.
Ọ bụ a picture mere mismatches-ita-nri nke Valletta, full of ọchụ nta ego tanned ụmụ akwụkwọ, na ụgbọ ala-free, ájá na-acha ochie obodo thatwill ibu Europe omenala isi obodo na itoolu izu - na unmatched ghe oghe ochie ngosi nka site Which ụbọchị ọ bụla iri puku kwuru iri puku ndị njem na-eso nduzi ya na ha yi pennants ka agha ntụte nke ha ọkọlọtọ, mgbe ahụ, ná mgbede, na St. Julian, na n'akụkụ nke ọzọ nke n'ọnụ mmiri, afọ ojuju na ịgba, ùrúrù na red wine na Inye ego mmiri oyi pint-dị ka Ogige Cisk.
Jonathan Ferris. N'ụbọchị nke asatọ mgbe Galizia nwụsịrị, ọ na-anọdụ na uwe na-acha anụnụ anụnụ na oghere Westin Dragonara. N'okpuru iko facade, na sofas na-anọdụ n'ụlọ ndị uwe ojii dị mma na uwe onye uwe ojii. Ferris bụ onye nche nke ụlọ nkwari akụ nke ise, nke a abụghịkwa ụzọ ha kwesịrị isi na Malta.
Maka na otu afọ gara aga, onye uweojii Ferris, bụ onye na-akpata laundering ego. Akwụkwọ akụkọ Galizia, ọ na-ekwu, enyeworo ya aka mgbe nile nyocha. "Ọ maara ihe anyị na-amaghị. Ndị mmadụ tụkwasịrị ndị nta akụkọ obi dị ka ndị uweojii. "Ferris gụrụ akwụkwọ ibe mwepu na Brussels, China, Germany, o bufere Gaddaffi ke November 2016, ọ na-akpali dị ka a ngalaba isi na Maltese Anti-Money Laundering Authority (FIAU). N'agbata March 2016 na July 2017, akụkọ anọ nke a na-enyo enyo na nrụrụ aka megide ndị ọrụ gọọmenti dere. Nile, ka Ferris na-ekwu, dabeere na nnyocha nke Galizia. Onye chọrọ ịgbaso ya, ọ bụrụ na ọ banye n'ime nkọwa, na-ewe oge.
The nchịkọta nke FIAU nnyocha na-aga dị ka nke a: Cabinet isi Keith Schembri mere eji ya igbe akwụkwọ ozi ụlọ ọrụ na Panama izochi 100,000 euro, nke o nwetara site n'aka ire nke atọ Maltese akwụkwọ ikike ngafe ka Russia. N'ihi ya, o nyere aka nyere otu onye na-ede akwụkwọ akụkọ Maltese ụgwọ otu nde euro. Ferris kwenyere na Schembri chọrọ ijide n'aka na akwụkwọ akụkọ gọọmentị ka dị. Schembri bụkwa onye na-ede akwụkwọ. Na: Schembri na mbụ Energy Minister Konrad Mizzi nwetara-iri-ngo si Dubai si a ụlọ ọrụ mere trades gasị gas na Malta. A na-agbanye ego a n'ụlọ ọrụ akwụkwọ ozi abụọ nke abụọ ahụ. Akwụkwọ blog ikpeazụ nke Galizia na-abanye "Ebe ọ bụla bụ ndị crooks".
Ego Euro 1.07 maka gas contracts?
Schembri na Mizzi na-agọnahụ ihe niile. Malta: A gaghị ezigara ndị uweojii akwụkwọ akụkọ banyere FIAU - ma ọ bụ ndị uweojii na - ede akwụkwọ - ndị ọchịchị. Ha enweghị ihe ọ bụla.
Ferris, onye ọrụ ibe ya bụ Charles Cronin ma ọ bụ onye isi FIAU bụ Manfred Galdez. Ọ dịghị onye ọzọ nọ n'ọfịs. Galdez gara, n'echiche nke ya, na ezumike nká n'oge. Na 16 June 2017, onye na-anọchi ya bụ Ferris na Cronin tinyere envelopu ọcha na ọkwa ha. "Enweghị m ihe kpatara ya," ka Ferris na-ekwu. Kemgbe ahụ, ọ pụrụ iji ụra na-ehi ụra. Ferris na Cronin maka "ihe ndị mere eme" FIAU na-agwa ya na ọ "nwere mmasị kachasị mma iji kwụsị.
Ọ bụrụ na ya na FIAU nọrọ, ọ gaara eso akụkọ akụkọ ikpeazụ nke Galizia, ka Ferris na-ekwu. Ọ bụ banyere Michelle Muscat, nwunye nwunye nke mbụ. Ihe ndekọ nke ha ụlọ ọrụ Egrant na Panama shouldhave asọpụta site Azerbaijan na 1.07 nde euro - justament mgbe Malta na Azerbaijan ama aka a nkwekọrịta maka gas na-enye 18 afọ. "Ha chọrọ igbochi nchọpụta a," ka Ferris kweere. O kwuola na ikike imebi iwu na-eme ka ọ bụrụghachi ya.
Na akụkọ FIAU ka amaradịrị na ha bụ "onye nnọchiteanya nke Daphne na ndọrọ ndọrọ ọchịchị" na ihe onye nkatọ ha nwere. Simon Busuttil bụ onye nnọchiteanya nke PN na-achọghị nchebe, naanị otu onye mmegide; nwoke nwere ụdị olu na onye ụkọchukwu telivishọn na United States, ụlọ nsọ ya na-adagharị, eriri na-acha uhie uhie n'apata ụkwụ. "Ozi naanị site na WhatsApp," ka ọ na-ekwu. A na-ekele ndị nleta na Ụlọ Nzukọ Mgbakọ na Ụlọ Nzukọ Alaeze, na aquarium-dịka ohere nke na-agafe n'okporo ámá nke Valletta.
Ka Galizia kpochapụrụ ọtụtụ ihe megide gọọmentị, Prime Minista Muscat họọrọ ịme ntuli aka na-agwụ na June. Busuttil bụ onye mmegide kacha elu. Onye tinyere akụkọ FIAU maka ya. Busuttil na-agbasakwa nkọwa na ihe na-atọ ụtọ n'ihu ụlọ ọrụ. O nyeghị aka: Maltese nọgidere na-eguzosi ike n'ihe nye Muscat. Busuttil furu efu, nke nwere ike ịbụ n'ihi eziokwu ahụ Malta ji akụ na ụba. "Mgbe nke ahụ gasịrị, achọrọ m iji nwayọọ nwayọọ hapụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị," ka ọ na-ekwu. "Ma ugbu a, mgbe ọ nwụsịrị, ihe niile dị iche."
Na July, Busuttil gbara mbọ ịchọpụta ndị ozi ahụ. Schembri na Mizzi gbara akwụkwọ. "Ọ bụrụ na m nwụọ, aga m aga Strasbourg," ka Busuttil na-ekwu. Ọ chọrọ ịrụcha ọrụ nke Galizia.
Onye blogger ahụ wakpoola Muscat, ndị fọdụrụ na gọọmentị, nakwa akụkụ dị ukwuu nke mmegide ahụ. Akuku na "isiokwu di nma", dika ndi iro ha kachasi ike n'isi ulo ikpe a. Tinyere nbuso onwe onye na ederede banyere inwe mmekọahụ. Ma ọ dịghị onye na Malta n'eche n'echiche n'ezie na ọ bụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị rụrụ arụ bụ ndị rapaara bọmbụ ahụ n'okpuru ụgbọ ala ya.
Galicia abanyela n'ọchịchọ mafia iji mee ka mmanụ si na Libya gaa n'ebe ndịda Europe. A na-eme atụmatụ a na Malta. A gwaghị onye ọ bụla. Oge ọ bụla a na-eji Semtex mee ihe. A na - emepụta nke a, dịka ọmụmaatụ, na Libyan Zuwara - ebe mmanụ si enweta.
Akwụsịghị mmegide ahụ
Ka o sina dị, ọtụtụ ndị nọ na Malta chọtara Muscat ka ọ bụrụ onye na-ahụ maka ọnwụ Galicia ma kwụsị. Ọ bụghị n'ihi Galizia. N'ezie, blogger nwere n'oge gara aga jụrụ uwe ojii nchebe N'ihi na o na-atụ egwu thatthis ga-emetụta ya ọrụ. Ịgbachitere boro Muscat, Galizia ezinụlọ, ndị mmegide na Maltese oru nta akuko, MEP Busuttil ekwu, sị: "I nwere ike ime ihe ọ bụla megide nrụrụ aka ka ogologo dị ka ihe rụrụ arụ na-eje ozi na-ekwe ka ọ nọgide ụlọ ọrụ." Iji anabata ha azụmahịa, na ala bụ Ndị na-eme ka ike gwụ - ma si otú ahụ kwado azụmahịa nke ndị omempụ a haziri ahazi.
Otú ọ dị, mmegide ahụ adịghị akọwapụta n'ọnọdụ ndị ahụ. Malta na-adabere na ụtụ isi ụlọ ọrụ ụtụ isi, ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa n'Ịntanet na irere ndị mba ọzọ bara ọgaranya. Pn Busuttil kwuru na. "Malta rerewo ọbụbụeze ya nye ego ruru unyi," ka Green Giegold na-ekwu. "O dochiela iwu nke iwu na omenala nke n'enwetaghị ntaramahụhụ na nkwonkwo n'etiti ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ego."
Na Casinostadt St. Julians na Malta na Mayfair mgbagwoju anya bụ otu n'ime ọtụtụ ụlọ ọrụ dị n'àgwàetiti ahụ,
PixelHELPER Akwụkwọ akụkọ
Debanye akwukwo ozi
nnapu mgwoagha Android App Bahrain 13 Federal Chancellery ohia ọkụ China ego ego Feuer osisi ịta freeRaif nnwere onwe nke echiche hercules enyemaka ndi mmadu mkpọsa mkpọsa Catalonia landmines Ịhụnanya amaghi oke Livestream Live iyi Enyemaka enyemaka Livestream Morocco nke m NSA n'ụlọ ndị mkpọrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị Akuku Orlando agha Saudi Arabia igweanu Help spanish mmiri Spirulina Uighurs Uyghur nchekwaba onwe United Stasi nke America upcycling ogwe aka ahia Ee anyị na iṅomi! nlekota oru